Olbia — cimilada bisha, heer-kulka biyaha
World jiga Wadamada Italy Olbia
Celceliska heerkulka maalin kasta ugu badnaan — 29.8°C August. Celceliska heerkulka habeenkii ugu badnaan — 21.7°C August. Celceliska heerkulka maalin kasta ugu yaraan — 12.5°C February. Celceliska heerkulka habeen ugu yaraan — 7.4°C February.
Celceliska heerkulka ugu badan ee biyaha — 25.7°C go'an August. The heerkulka ugu hooseeya celcelis ahaan biyaha — 13.4°C go'an February.
Roobab ugu badan — 56.8 mm Waxaa lagu duubay November. Roobab Ugu Yar — 8.6 mm Waxaa lagu duubay July.